🥇 ▷ Xagaagii wuu dhamaaday, laakiin ma ahan barnaamijyadii bilaashka ahaa ee iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga ✅
Xagaagii wuu dhamaaday, laakiin ma ahan barnaamijyadii bilaashka ahaa ee iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga
In yar, xagaaga ayaa dhammaanaya, oo maalmahaaas wacan ee dabaasha, xeebta ama xeryaha buuraleydu way dhammaadeen. Laakiin xitaa haddii ay dhammaatay, waxaan halkan ku sii wadi doonnaa annagoo ku siinayna Codsiyada bilaashka ah ee ugu fiican waqti xadidan loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
Qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee ku jira Qalabka ‘iOS App Store’ ayaa leh qiimo aad u sarreeya. Taasi waa sababta aan uga soo qaadanayno iPadízate waxaan rabnaa inaan kaa caawino sidii aad ku heli laheyd barnaamijyo la heli karo oo la heli karo waqti xaddidan oo gebi ahaanba bilaash ah.
Xusuusnow, liistadan waxaad ka heli doontaa dalabyo bilaash ah maanta. Waxaa laga yaabaa berrito sidoo kale. Laakiin ugu dhakhsaha badan waxay ku laaban doonaan sicirkoodii caadiga ahaa markaa ka faa’idayso deeqda oo soo degso meelaha aad ugu jeceshahay sida ugu dhaqsaha badan U tag iyaga!
Way ku xiisi kartaa | Khibradayda aan la leeyahay barnaamijka IP Pro (2018) iyo sababta aan ugu door bidaa iPhone kasta
Barnaamijyo bilaash ah oo loogu talagalay iPhone iyo iPad – Sebtember 2
Maker PhotoTangler Collage Maker
Codsi tafatirka sawirka oo sawirradaada u rogaaya qurxiyo quruxsan. Waa si buuxda loo habeyn karo oo xitaa kuu oggolaanaya inaad dooratid xalka iyo muuqaalka raadiyaha.
Cimilada Tooska: Digniinta & Saadaasha
Cimilada tooska ah waa codsi macluumaad cimilo aad u xiiso badan. Waxay leedahay naqshad aad u qurux badan oo midab leh, xogta ay bixisona aad ayey u saxsan tahay. Ku habboon hadda bilooyin qabow iyo rainiin ayaa soo socda.
Way ku xiisi kartaa | Qalabkaan iPhone iyo iPad waxay badbaadin karaan noloshaada gaariga
Codsigan waxtarka leh wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beddesho qaabka sawir kasta iyo feylka faylalka sida SVG, EPS, ICO, PNG, PDF, PS, JPG, EMF, WMF, BMP, TIFF, WEBP ama DXF. Aad bay u fududahay in la isticmaalo oo loo fuliyo wixii uu ballanqaaday.
Qarax: Taliska Gantaalaha casriga ah
Waxaan ku soo gabagabaynaynaa ciyaar xiiso leh oo ay tahay inaad ka difaacdo magaaladaada Qaraxyada ka soo dhacaya samada adigoo adeegsanaya gantaallo la hago.